Nanapa-kevitra ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo fa haato aloha ny fanotofana tany ka namoaka didy fampiatoana ny asa ny Kaominina mahakasika izay satria miteraka fiakaran’ny rano. Nanambara ihany koa ny sekretera jeneralin’ny Kaominina Heriniaina Razafimahefa fa mila aato izany amin’izao fotoam-pahavaratra izao. Ny tombontsoan’ny vahoaka madinika mipetraka amin’ny toerana iva no jerena, ka tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ny kaominina, hoy ny filohan’ny Filankevitry ny tanàna, kolonely Faustin Andriambahoaka dia izay fampiatoana ny asa fanatofana izay. Raha ny fitarainan’ny mponina teny an-toerana dia amin’ny alina amin’ny 8 ora alina ka hatramin’ny 4 ora maraina no manao fanotofana ireo kamiaobe, ka tsy ahitan’izy ireo tory. Ny fihovitrovitry ny tany ateraky ny fandalovan’ireo kamiao mpitatitra tany ihany koa dia miteraka fitresahana ho an’ireo trano manodidina izay vita amin’ny biriky tany avokoa. Nisy ihany koa fianakaviana efa nanomboka nanetsa, nefa dia voatery tsy maintsy nesorina ireo ketsa efa vita satria voalaza fa hototofana anio alina ny tanimbary. Nankasitraka izao fanapahan-kevitra noraisin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra notarihan’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana izao ireo mponina tamin’ny faritra iva teny Ankazomanga-Andranomahery sy teny Amboditsiry- Marais Masay.